Sida Loo Qoro Warqadda Aqbalida Deeqaha
Ku guuleysiga deeqda waxbarasho waa farxadda arday kasta gaar ahaan marka ardaygu u waayo maalgelin waxbarashadiisa / iyada. Xilligan la joogo, ardaygu wuxuu ku faraxsan yahay in riyadiisii ​​/ himiladeedii ahayd inuu sii wato shahaadadaas ama koorsada ay ugu dambayntii rumoobayso. Laakiin markaa, waa inaad qortaa warqad aqbalaad deeq waxbarasho ah si aad ugu sheegto kafaala qaadayaashu inay ogaadaan inaad aqbashay abaalmarinta maaliyadeed oo aad u mahadnaqdo iyaga sidoo kale.
Sida markii qof wax ku siiyo ama ku siiyo wax caawimaad ah, waxaad had iyo jeer dhahdaa "mahadsanid", taasi waa sida saxda ah warqadda aqbalitaanka deeqdu waxay ku saabsan tahay.
Waad xasuusan kartaa sida ay kuugu qaadatay waqti aad u badan inaad qorto codsi deeq waxbarasho oo khasab ah si aad ugu baran karto barnaamijkaas kafaala qaad. Hadda oo aad heshay deeqda waxbarasho, ha u cararin si aad u dabaaldegto weli. Sida aad u qortay qormadaas deeqda waxbarasho ee qasabka ah, qor warqad mahadnaq aad u qallafsan si aad ugu muujiso mahadnaqa kafaala qaadayaasha deeqda waxbarasho.
Haddii aadan aqoon sida loo maro tan, waxaan si taxaddar leh kuugu hagi doonaa sida loo qoro warqad aqbalitaan deeq waxbarasho oo ku habboon qodobkan.
Waa maxay warqadda aqbalida deeqda waxbarasho?
Goorma ayaan qori karaa warqadda aqbalida deeqda waxbarasho?
Tallaabada 1: Nooca warqadda
Tallaabada 2: Hubso in warqadda loo diray kafaalaqaadaha deeqda waxbarasho
Talaabada 3: Sheeg deeqda waxbarasho ee lagu siiyay
Talaabada 4: Sheeg muhiimada deeqda waxbarasho ay kuu leedahay
Tallaabada 5: Warqaddaadu ha muujiso mahadnaq
Tallaabada 6: Ku muuji daacadnimo warqaddaada
Tilaabada 7: Dib u akhri warqadda
Maxaan ku dari karaa warqadda aqbalida deeqda waxbarasho?
Foomka warqadda aqbalaadda deeqda waxbarasho
Tallaabada 1: Cinwaankaaga
Tallaabada 2: Magacaaga
Tallaabada 3: Cinwaanka Qaataha
Tallaabada 4: Magaca Qofka Qaata
Tilaabada 5: Sheeg Magacaaga iyo Deeqda waxbarasho ee Aad heshay
Tallaabada 6: Sii Kooban oo Kooban oo ku saabsan sida Deeqda waxbarasho ay kuu caawisay
Tallaabada 7: Xaqiiji Aqbalidaada Deeqda waxbarasho
Tallaabada 8: Gunaanad
Warqad aqbalid deeq waxbarasho, sidoo kale loo yaqaan warqad mahadsanid, waa warqad aad uqorto hay'adda abaalmarinta deeqda waxbarasho ama hay'ad muujineysa inaad aqbashay deeqda waxbarasho ee ay ku siiyeen.
Ka-faa'iideystayaasha waxay warqaddan u qoraan si ay u muujiyaan inay go'aansadeen inay aqbalaan soo-jeedinta ah inay ku sii wataan shahaadadooda ku hoos jirta kaalmada maaliyadeed ee ay doorteen hay'adda.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa goorma waqtiga ugu fiican ee qalinka warqad aqbalaad qalbi leh loogu dhiibo kafaala qaadayaashaada. Hagaag, waqtiga ugu fiican ee warqadan la qoro waa isla marka la helo warqad rasmi ah oo lagu ogeysiinayo adiga in laguu doortay ka-faa'iideystaha gargaarka maaliyadeed.
Ha soo dirin mahadnaq kadib markaad dirto arjigaaga. Waxaad u maleyn kartaa inay ku qancin doonto dugsiga ama ururka deeqaha waxbarasho inay tixgeliyaan laakiin tani run maahan. Hubso inaad sugto dugsiga ama ururku inay tixgeliyaan oo ay kuugu doortaan abaalmarinta marka hore ka hor intaadan u qorin warqad mahadsanid.
Dhanka kale, qorida warqad aqbalitaan deeq waxbarasho markii aad hesho abaalmarinta waxay u adeegtaa waqtiga ugu fiican ee lagu go'aaminayo inaad wali xiiseyneyso abaalmarinta maaliyadeed iyo inkale. Adoo qoraya mahadnaqid waxay muujineysaa inaad aqbashay soo jeedinta.
Haddii aad rabto inaad qorto warqad aqbalid ah oo ku saabsan kaalmada dhaqaale ee hay'ad ama hay'ad ay ku siisay, waxaa jira tallaabooyin qaas ah oo ay tahay inaad qaado si aad u qorto warqad noocaas ah.
Si aad u qorto warqad aqbalid ah deeq waxbarasho, raac talaabooyinka hoose:
Marka hore ku qor warqad mahadsanid warqad qalin leh, ku aqri marar badan, ka dibna ku qor kombiyuutar. Hubso inaad isticmaasho qaabka iyo weedhaha habboon si aad ugu muujiso mahadnaqaaga.
Inta aad qoreyso warqadda, iska ilaali qaladaadka, curyaaminta, iyo kala dheereynta.
Intaad qoreysid warqadda mahadsanid, hubi inaad cinwaanka warqadda ugu dirto dugsiga ama ururka abaalmarinta deeqda waxbarasho.
Waxaad ku xallin kartaa warqadda adoo adeegsanaya Gacaliye Deeqo Deeqo or Gacaliye (magaca kafaala-qaadaha deeqda waxbarasho).
Si la mid ah sida aad ugu qortid magaca kafaala-qaadahaaga deeqda waxbarasho inta lagu gudajiro salaanta ayaa ah isla sidii aad u xusi lahayd magaca deeq-lacageedka laguu siiyay jirka warqadda.
Adoo sheegaya magaca deeqda waxbarasho ee lagu siiyay, kafaala-qaadayaashu waxay ogaan doonaan qorshayaasha lagu siiyay qaybta dhaqaalaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay ogeysiin doontaa kafaala-qaadaha inaad adigu aad u heellan tahay.
Intii lagu guda jiray codsigaaga deeqda waxbarasho, waxaad sheegtay sababaha aad ugu baahan tahay abaalmarinta. Hagaag, waa inaad si isku mid ah u sheegtaa isla sababtii mar labaad.
Markan, waxaad u sheegi doontaa hay'adda deeq-lacageedka sida ay kuugu dejiyeen dariiqa lagu gaaro himilooyinkaaga xirfadeed.
Hadda oo aad heshay deeqda waxbarasho si aad u barato koorsadaada riyada, hubi in qaabka warqaddaadu muujineyso mahadnaq qoto dheer iyo farxad.
Maskaxda ku hay in deeqaha waxbarasho intooda badani ay yihiin kuwo ku saleysan baahi, sidaa darteed deeq bixiyeyaashu waxay siiyaan kaalmo lacageed ardayda oo qadarin doonta kaalmada.
Marka, intaad qoreyso warqaddaada mahadsanid, qalbigaaga ugu shubo kafaala-qaadayaasha.
Intaad ku muujineyso mahadnaq warqaddaada mahadsanid, ka dhig mid aad daacad u ah. Ha ka been abuurto.
Xusuusnow inay aad u adagtahay inaad ku guuleysato deeq waxbarasho. Marka, muuji farxaddaada markii aad heshay warqadda deeqda waxbarasho.
Markaad dhameysid qorista warqadda, iska hubi in saaxiibkaa, macallinkaaga, ama la-taliyahaaga hagaha uu caddeeyo warqadda kahor intaadan u dirin hay'adda deeqda waxbarasho.
U siinta qof kale waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato haddii warqaddu xambaarsan tahay mahadnaq iyo in kale.
Intaad qoreyso warqad aqbalitaan deeq waxbarasho, waxaa jira qaybo macluumaad muhiim ah oo ay tahay inay warqaddaadu gudbiso si ay u muujiso inaad fahamsan tahay shuruudaha deeqda waxbarasho.
Sidaa darteed, kuwa soo socdaa waa faahfaahinta ay tahay inaad ku darto warqadda mahad-celintaada:
Taariikhdaada waxbarasho iyo sida ay kugu kaliftay inaad raadiso deeqda waxbarasho.
Sida aad u qorsheyneyso inaad u adeegsato abaalmarinta maaliyadeed inaad ku maal galiso doorashadaada barnaamijka iyo koorsadaada.
Maxaad u dooneysaa inaad ku sii wadato doorashadaada barnaamijka iyo koorsada xarun gaar ah iyo sida aad si wanaagsan uga faa'iideysan doonto abaalmarinta dhaqaale ee kafaala-qaadahaaga inta aad ku guda jirto daraasaddaada.
Sida ugufiican ee aad u fahamtay shuruudaha deeqda waxbarasho iyo waxaad sameyn doonto si aad ula kulanto shuruudaha (haddii ay jiraan).
Xaaladda aad waxoogaa wareersan tahay, weydii su'aalaha jirka deeqda waxbarasho si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Xaraf kasta wuxuu leeyahay qaab lagu qoro. Xusuusnow in warqadaada dalabka deeqda waxbarasho ay laheyd qaab, taasi waa si la mid ah qaabka warqada aqbalidaadu qaab waliba u yeelan doonto.
Marka, markaad qoreyso warqaddaada aqbalida deeqda waxbarasho, ilaali qaabka aan hoosta kuugu siin doono.
Ku billow qoritaanka warqadda adoo gelinaya cinwaankaaga. Tani waxay ka caawineysaa qaataha inuu ogaado cidda soo dirtay iyo meesha uu ka imanayo. Cinwaankaagu waa inuu muuqdaa
Kadib qoritaanka cinwaankaaga, ku dar magacaaga. Xusuusnow inay ogeysiin doonto deeq-bixiyeha cidda warqaddu ka imaanayso. Hubso inaad is aqoonsato.
Tani aad ayey muhiim ugu tahay deeqda waxbarasho waad ku mahadsan tahay warqadda. Waxay awood u siin doontaa hay'adda dhajinta inay ogaato halka warqaddu u socoto.
Haddii aad u soo direyso warqadda adoo adeegsanaya cinwaanka iimaylka kafaalaqaadaha, kuma dari doontid cinwaanka qaataha. Hubso in cinwaanka iimayl qaadaha uu sax yahay ka hor intaadan u dirin warqaddaada iimaylka.
Ha iloobin inaad ku darto magaca qofka qaata (deeq bixiyeha deeqda) inta aad qoreyso warqaddaada mahadsanid. Waad wax ka qaban kartaa warqadda ku socota hay'adda ama hay'adda haddii aadan aqoon magaca kafaala-qaadaha.
Tani waxay ka caawin doontaa qof kasta oo hela warqadda isagoo ku hadlaya magaca kafaala-qaadaha inuu ogaado cidda warqadda loo dirayo.
Markaad bilaabeysid jirka warqadda, isbarasho kooban oo naftaada ah. Hordhaca, ogeysii kafaala-qaadaha inaad ka-faa'iideyste abaalmarintooda. Ku dadaal inaad sheegto deeqda waxbarasho ee saxda ah.
Intaa ka dib, u sheeg kafaala qaadaha inaad heshay deeqda waxbarasho oo aad u qoreyso si aad u muujiso aqbalaadaada iyo mahadnaqa abaalmarinta lacageed.
Markaad muujineyso mahadnaq dhammaan daacadnimada, sheeg sababaha aad u dalbanayso gargaarka maaliyadeed iyo sida abaalmarinta ay gacan uga geysatay inay kuu jihayso dhabbaha lagu gaaro himiladaada xirfadeed.
Halkan, waxaad ku siineysaa warbixin kooban oo ku saabsan taariikhdaada, sababaha aad u dooratay barnaamijkaaga iyo koorsadaada, iyo sida deeqda waxbarasho ay kaaga caawin doonto inaad ku guuleysato riyadaada xirfadeed.
Ha dhammaystirin warqadda adigoon mar kale xaqiijin inaad aqbashay deeqda waxbarasho qalbi daacad ah. Tani waxay muujineysaa kafaala qaadayaasha inaad qarka u saaran tahay inaad kubilaabto waxbarashaddaada abaalmarinta maaliyadeed.
Ku soo gabagabeeyo warqadda adoo u mahadcelinaya deeq-bixiyeyaasha isla markaana ku celinaya shuruudaha deeqda waxbarasho ama waxqabad kasta oo dheeraad ah oo laga yaabo inaad ku soo gabagabeyso si aad u sharraxdo aqbalaaddaada deeqda waxbarasho.
Haddii kafiilahaagu yahay iskuul, waxay kuu soo diri doonaan tilmaamo dheeraad ah gudaha warqadda deeqda waxbarasho waxaana lagaa doonayaa inaad ku jawaabto iyaga adoo fulinaya tilmaamahaas. Marka, isku day inaad ku darto tilmaamaha gunaanadkaaga.
Sida loo Codsado Jaamacadaha Dibadda - Faahfaahin buuxda
Sida loo Dalbo Jaamacada Kanada - Tilmaamaha Talaabada Tilmaamaha
3 Dariiqo oo Loogu Sugo Amaahda Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation Kanada - Ph.D.
Sida Loogu Qoro Warbixinta Sheybaarka 5 Talaabo oo Fudud
Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda
Previous Post:10 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo ka socda Singapore oo wata Shahaadada
Post Next:21ka Websaydh ee Koodhadhka ugu Fiican ee Carruurta